လုပ်ငန်းခွင်မှာတော်ရုံခင်တာ လောက်နဲ့မ ပြောသင့်တဲ့စကားတွေက… – Trend.com.mm
Posted on May 4, 2019 April 29, 2019 by Shun Lei Phyo
စကားစကားပြောပါများစကားထဲကဇာတိပြဆိုသလိုပဲ စကားများများ ပြောရာက နေအမှားပါတတ်တာ တွေအများကြီးပါ။ လုပ်ငန်းခွင်လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ယောက်အ နေနဲ့ကိုယ်နဲ့ နေ့စဉ်ထိတွေ့ နေတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပြောတိုင်းမ ကောင်းတဲ့စကားမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာ သတိထားပါ။ လူတိုင်းကို ခင်မင်တာကောင်းပင်မဲ့ လူတိုင်းနဲ့ရောလွန်းရင်တော့ အမှားပါသွားတတ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ လုံးဝကို မ ပြောသင့်တဲ့ အ ကြောင်းရာလေးတစ်ချို့ကဘာတွေလဲ?….
(၁) သူဌေးရဲ့မ ကောင်းကြောင်းကို မ ပြောပါနဲ့
(၂) တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ လစာကို စပ်စပ်စုစုမေးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့
(၃) ကိုယ့်ရဲ့လစာနဲ့ပတ်သတ်ပြီးငြီးတွားတာမျိုးမလုပ်မိပါစေနဲ့
(၄) ကိုယ့်အချစ်ရေးကိစ္စ တွေကို ခ ရေစိတွင်းကျ မ ပြောပြပါနဲ့
(၅) တစ်ခြားအလုပ်က ဘယ်လို ကောင်းကြောင်းတွေဘယ်လို ပံ့ပိုးပေးတယ်ဆိုတာ တွေကို သူများတွေရှေ့အကျယ် အကျယ်မ ပြောမိပါစေနဲ့။
စကားစကားပွောပါမြားစကားထဲကဇာတိပွဆိုသလိုပဲ စကားမြားမြား ပွောရာက နအေမှားပါတတျတာ တှေအမြားကွီးပါ။ လုပျငနျးခှငျလုပျကိုငျနသေူတဈယောကျအ နနေဲ့ကိုယျနဲ့ နစေ့ဉျထိတှေ့ နတေဲ့ လုပျငနျးခှငျမှာ ပွောတိုငျးမ ကောငျးတဲ့စကားမြိုးတှရှေိတယျဆိုတာ သတိထားပါ။ လူတိုငျးကို ခငျမငျတာကောငျးပငျမဲ့ လူတိုငျးနဲ့ရောလှနျးရငျတော့ အမှားပါသှားတတျပါတယျ။ ဆိုတော့ လုပျငနျးခှငျမှာ လုံးဝကို မ ပွောသငျ့တဲ့ အ ကွောငျးရာလေးတဈခြို့ကဘာတှေလဲ?….(၁) သူဌေးရဲ့မ ကောငျးကွောငျးကို မ ပွောပါနဲ့(၂) တဈယောကျယောကျရဲ့ လစာကို စပျစပျစုစုမေးတာမြိုးမလုပျပါနဲ့(၃) ကိုယျ့ရဲ့လစာနဲ့ပတျသတျပွီးငွီးတှားတာမြိုးမလုပျမိပါစနေဲ့(၄) ကိုယျ့အခဈြရေးကိစ်စ တှေကို ခ ရစေိတှငျးကြ မ ပွောပွပါနဲ့(၅) တဈခွားအလုပျက ဘယျလို ကောငျးကွောငျးတှေဘယျလို ပံ့ပိုးပေးတယျဆိုတာ တှေကို သူမြားတှေရှအေ့ကယျြ အကယျြမ ပွောမိပါစနေဲ့။